गोविन्दको नाममा काश्मिराले लेखिन् यस्तो सन्देश: मामा-भान्जा बीचको विवाद झन बढ्यो – Post Patrika
भारतीय फिल्ममा स्वस्तिमाले बलिउडका अभिनेत्रीलाई माथ ख्वाइन्, आइटम डान्समा ‘सुपर सेक्सी लुक्स’ [ भिडियोसहित ]
कोभिड नेपाल: मौसमी फ्लू र कोभिड भाइरस सङ्क्रमण कसरी छुट्टाउने
भारतकी विश्वप्रख्यात गायिका लता मंगेशकरको मृत्युको खबर बाहिर आयो, निकालियो यस्तो बिज्ञप्ति
लाइभ रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै यी महिला पत्रकार परिन दुर्घटनामा, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियो सहित)
माघ ०९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
देशकै प्रतिष्ठित ब्यक्तीको निधन, भोली आइतवार शोक विदा दिईने
एकाएक ह्वातै बढ्यो महामारी, एकै दिन यति धेरै संक्रमित, १६ जनाको मृत्यु
रुपन्देहीकी ब्रिन्दालाई आफ्नै श्रीमानले जब बहाना बनाएर ग्राहकको कोठामा पठाए..
बेडमा श्रीमानसँग रोमान्सको पल भिडियो खिच्ने सोचेर थिच्दा फेसबुकमा लाईभ भएपछि…
मुख्य पृष्ठ /News/गोविन्दको नाममा काश्मिराले लेखिन् यस्तो सन्देश: मामा-भान्जा बीचको विवाद झन बढ्यो
गोविन्दको नाममा काश्मिराले लेखिन् यस्तो सन्देश: मामा-भान्जा बीचको विवाद झन बढ्यो
1,236 1 minute read
एजेन्सी । प्रख्यात हास्य अभिनेता कृष्ण अभिषेक र अभिनेता गोविन्दको बीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । मामा गोविन्दको बारेमा कृष्णले बारम्बार भनाई सार्वजनिक गरेपछि गोबिन्दले पनि त्यसको जवाफ दिएका थिए । गोविन्दले कृष्णको जुम्ल्याहा बच्चा विरामी हुँदा अस्पतालमा भेट्न नगएको भन्दै दिएको वयानमा आपत्ती जनाएका थिए ।
कृष्णको छोराछोरीलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदा उनको श्रीमतिले भेट्न नदिएको भन्दै गोविन्दाले भनेपछि फेरी कृष्णको श्रीमतिले लामो स्टाटस लेखेकी छन् । कृष्णको श्रीमति कश्मिरा शाहले आफ्ना जुम्ल्याहा सन्तानको तस्बिर राख्दै गोबिन्दको लागि लामो सन्देश लेखेकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कश्मीरी शाहले आफ्नो पोष्टमा लेखेका छन् म मेरा सन्तानलाई अप्ठेरो अवस्थामा देख्न सक्दिन । ठूला ब्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि साना छोराछोरीको प्रयोग गरिरहेको मलाई मन पर्दैन । म त्यसो गर्न अनुमति दिन्न । कश्मिरा लेख्छिन्, ‘जीवन एक निर्देशन गाईडको साथ आउँदैन, तर यो आमाको साथ आउँदछ र तिमीहरुलाई सुरक्षा गर्नु मेरो काम र मेरो प्राथमिकता हो।’
‘एक आमाको रूपमा यो मेरो कर्तव्य हो कि तिमीहरुलाई कुनै कष्ट नहोस् । एक आमाको रूपमा, तिमीहरुलाई दुखेको देख्दा मेरो मन दुख्छ । म तिमीहरुलाई अरुले दिने दुखवाट टाढा राख्न चाहन्छु । कश्मिराले अगाडि लेखिन्, ‘आमाको रूपमा, म तिमीहरुलाई वचन दिन्छु कि तिमीहरुलाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न दिने छैन।
जबसम्म म जीवित छु वा यो संसारमा रहने छैन त्यतीबेला पनि तिमीहरुको रक्षा गर्नेछु । जब तिमीहरु ठूलो हुनेछौ । तिमीहरुले बुझ्ने छौ की कोही ठूलो ब्यक्तिले तिमीहरुलाई आफ्नो स्वार्थको लागि कसरी प्रयोग गर्न खोजीरहेका थिए । तिमीहरुको आमा काश्मिरा शाह शर्मा।
गोविन्द र कृष्ण बीचको विवाद द कपिल शर्मा शो वाट सुरु भएको थियो । गोबिन्द कार्यक्रममा उपस्थित भएको बेलामा कृष्ण देखा परेनन् । कृष्ण सो कार्यक्रमको एक कलाकार थिए । उनलाई गोविन्दा आएको बेलामा किन कार्यक्रममा नगएको भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले मामासंगको विग्रिएको सम्बन्धका बारेमा सार्वजनिक गरिदिएका थिए । कृष्ण अभिषेकले भनेका थिए कि उनका जुम्ल्याहा रायन र कृष्णको जन्म हुँदा उनका मामा गोविन्द उनलाई भेट्न आएनन्।
बुबा अपाङ्ग औषधी गर्ने पैसा भएन, लकडाउनमा दाउरा लिन जादा कसैले नसोचेको भयो
ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
लौन फेरि प्रहरी माथी यस्तो के आपत आईलाग्यो ? तुरुन्त हेर्नुस भिडियो सहित
५० बर्ष पुग्न लागेकी बलिउडकीअभिनेत्री ऐश्वर्या राय अझै हट एण्ड फिट हुनुको रहस्य….